देउवापछि बाबुरामको आ’क्रोश : ओलीजस्ता पाख’ण्डी अ’न्धराष्ट्रवादीबाट जोगिन जरुरी – " सुलभ खबर "
देउवापछि बाबुरामको आ’क्रोश : ओलीजस्ता पाख’ण्डी अ’न्धराष्ट्रवादीबाट जोगिन जरुरी
पोखरा। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा समाजवादी पार्टी संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राष्ट्रवादलाई नक्कलीको संज्ञा दिएका छन्।
आइतबार पोखरामा संघीय समाजवादी पार्टीका उम्मेदवार धर्मराज गुरुङलाई भोट माग्‍न आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले केपी ओलीले जनताको अगाडि तिघ्रा ठटाएर राष्ट्रवादको डंका पिटेको आ’रोप लगाएका हुन्।
‘जनताको अगाडि आएर तिघ्रा ठटाएर राष्ट्रवादी भन्ने आन्तरिकरूपमा लत्र्याक्क परेर केही पनि माखो नमा’र्ने यस्ता पा’खण्डी अ’न्धराष्ट्रवादीहरूबाट तपाईंहामी बच्न जरुरी छ,’ केपी ओलीलाई इंकित गर्दै भट्टराईले भने, ‘तर, यहाँका शासकहरू बाहिर बाहिर जनतालाई राष्ट्रियताको चर्को डंका पिट्ने र भित्रभित्र विदेशीशक्तिसँग झुकेर आफ्नो देशको भूमी सुम्पने काम राजा महेन्द्रदेखि ओलीसम्मले गरेका छन्। त्यस्तो राष्ट्रवादको नारा उठाउनेले यसबारे किन केही गर्नु भएको छैन?’
उनले समाजवादी पार्टीले प्रकारको अन्धराष्ट्रवादी बाटो नभइ देशभक्तिपूर्ण बाटो लिएको दाबी गरे। त्यस्तै, वर्तमान सरकारले भारतीय नक्साको विषयमा कूटनीतिक नोट पठाएकोबारे पनि उनले टिप्पणी गरे।
यसरबारेमा भारतलाई सीधा भन्‍न सक्नुपर्ने भट्टराईले बताए। ‘बाहिर राष्ट्रबाटको डं’का पि’ट्ने, भित्र सत्ताको डरले लत्रक्क परेर लत्रेर बस्ने। यस्तो नक्कली राष्ट्रवादबाट हामी कहिले मुक्त हुने?,’ उनले प्रश्न गरे।
नेपालको सार्वभौमसत्ता, नेपालको स्वाधिनता मुटुभन्दा प्यारो विषय रहेको भट्टराईको तर्क थियो। ‘राष्ट्रियता र स्वाधिनताको प्रश्न जहिले पनि अहम प्रश्न हुन आउँछ। तर, अहिले नेकपाका नेता खास गरी वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जनताको स्वाधीनता र सार्वभौसत्ताको दोहन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘कालापानी लिपुलेकको विषय उठिरहेको छ, कालापनीमा ६० वर्षदेखि भारतीय सेना त्यहाँ आएर बसिराखेको छ। लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र जो कालीनदीको सुगौली सन्धिले सिमाना निर्माण गरेको छ। त्योभन्दा पूर्वको भूभाग नेपाली भूभाग हो भनेर सुगौली सन्धिको धारा ५ मा प्रष्ट लेखेको छ।’
गत कात्तिक २३ मा बोलाइएको पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको भेलामा आफूले देशको भूमि रक्षा गर्न सीधै नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता गर्न सुझाव दिएको बताए। कर्मचारी संयन्त्रबाट यो समस्याको हल नहुने उनको भनाइ छ। उनले मंसिर १४ को निर्वाचन उपनिर्वाचन मात्रै राजनीतिक महत्वका निर्वाचन रहेको बताए।
‘प्रतिनिधिसभाको लागि कास्की २ मा मात्रै उपनिर्वाचन हुँदैछ। एउटा सिटले के फरक पार्छ भन्‍ने तपाईंहरूलाई लाग्न सक्छ,’ उनले भने, ‘इतिहासका यस्ता खासखास मोड हुन्छन्। जहाँ सानो झिल्कोले डढेलो लगाउन भनेजस्तै तपाईंहरूको एउटा सुझबुझपूर्ण निर्णयले नेपालको इतिहासको कोल्टे फेर्न सक्छ। त्यसैले यो निर्वाचन हामीले अत्यन्त महत्वको साथ हेरेका छौँ। तपाईंहरूको आजको उपस्थितिले आउँदो १४ गते सबैलाई चकित पर्ने निर्णय गर्दैहुनुहुन्छ भन्ने आशा मिलेको छ।’
नेकपा र कांग्रेसलाई धेरै पटक जनताले प्रयोग गरिसकेको उनको भनाइ छ। ‘पुराना पार्टीले समय अनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। त्यतिबेला दूरगामी सोँच राख्ने मानिसहरूले, समयको आवश्यकतालाई बुझ्‍ने मानिसहरूले, देशको आवश्यकता बुझ्‍ने मानिसहरूले नयाँ पहल लिन्छन्,’ उनले भने, ‘अब कांग्रेस र कम्युनिष्टले देश अघि बढ्न सक्दैन भन्‍ने निचोडमा जनताहरू पुग्‍न जरुरी रहेको छ।’
१० जोड १ को प्रदेशहरू राज्य पुनर्संचनामा हुनुपर्ने उनले बताए। कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई अब बेहोर्न नसक्ने उनको तर्क थियो। बिपीको पुस्ता सकिएपछि कांग्रेस थाकेर कता जाने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ। त्यस्तै नेकपाको सरकारले दुई वर्ष केही नगरेको उनको आरोप छ।
‘कम्युनिष्ट पार्टीकै महासचिवले बालुवाटारको जग्गा कब्जा गरेको तथ्यले देखाएको छ। उहाँ अहिले त्यो बाट भाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ उनले थपे, ‘रवीन्द्र अधिकारीजी जानु भो उहाँलाई कुनै पनि तरिकाले आरोपित गर्ने मेरो मनसाय छैन। सायद उहाँ रहनु भएको भए केही गर्नुहुन्थ्यो की म अपेक्षा गर्छु। तर, वाइडबडी प्रकरणमा सत्तामा भएकाहरूले नै अर्बौं भ्रष्टाचार गरे।’
उनले कम्युनिष्टहरूले नै ३३ किलो सुन लुकाएको आरोप लगाए। बुढीगण्डकी, एनसिएल प्रकणमा मिलिमतो कम्युनिष्टहरूकै रहेको आरोपसमेत उनले लगाउन भ्याए।
‘कम्युनिष्टहरूको उठबस हेर्नुस कमिसनखोर र भ्र’ष्टा’चारीसँग भएको छ,’ उनले भने, ‘अर्बौं भ्रष्टाचार गर्नेहरूले पोखराका सुकुम्बासीलाई किन व्यवस्थावन गर्दैनन्? जबकि संविधानमै सबै नागरिकको आवास होस भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। त्यसैले यो चुनावमा नयाँ मौका आएको छ।’ (थाहाखबर)